Gedo: Diyaarado aan la aqoon oo xalay duqeyn ka geystay gobolka Gedo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Gedo: Diyaarado aan la aqoon oo xalay duqeyn ka geystay gobolka Gedo
Gedo: Diyaarado aan la aqoon oo xalay duqeyn ka geystay gobolka Gedo
Wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelcadde ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay ay habeenimadii xalay gantaalo ku garaacaan qeybo kamid ah deegaankaasi.
Sawiro ay faafiyeen rurka al-shabaab e ka taliya Ceelcade
Jug culus oo loo maleynayo duqeyn ay geysteen diyaarado dagaal ayaa xalay laga maqlay xaafado kamid ah deegaanka Ceelcadde ,sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in xaafado kamid ah deegaankaasi ay ku dhaceen ganataalada diyaaradaha ee duqeymaha fulinayay.
Inkastoo aan la ogaan karin diyaaradaha duqeyntaan fuliyay waxa ay ahaayeen iyo halka laga leeyahay hase ahaatee wararka qaar oo aan helayno ayaa sheegaya in diyaaradahan laga leeyahay dalka Kenya.
Khasaaraha ka dhashay duqeyntan ay fuliyeen diyaaradahan dagaal ayaa warar hordhaca ah ay sheegayaan in dumar iyo carruur ay waxyeelo ka soo gaartay kuwaasoo deganaaa xaafada Makka oo ah halka ugu badan ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha dagaalka ee duqeynta fuliyay.
Deegaanka Ceelcadde oo kamid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin Malayshiyaadka alshabaab ayaa lagu xasuustaa weerarkii askarta badan looga laayay ciidanka Kenya ee dhacay bishii Janaayo 2016-kii xiligaas oo xoogag ka tirsan alshabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ciidanka Kenyan ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo.edi